Kiribati na-emechi oke ala mana ọzụzụ ile ọbịa na-agba ọsọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Kiribati » Kiribati na-emechi oke ala mana ọzụzụ ile ọbịa na-agba ọsọ
Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ Kiribati • News • Iwughachi • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Kiribati, na eze Republic of Kiribati, bụ mba agwaetiti nọọrọ onwe ya, ihe dị ka 1900 kilomita site na Hawaii, na etiti Pacific Ocean. Ndị na-adịgide adịgide karịrị 119,000, ihe karịrị ọkara n'ime ha bi na Tarawa Atoll. Steeti mejuputara agwaetiti 32 na otu agwaetiti coral, Banaba.
Ndị njem nlegharị anya nke Kiribati (TAK) amalitela Protocols Kiribati Tourism & Hospitality maka New Normal ọzụzụ maka ndị ọrụ nkwari akụ na ndị njem na agwaetiti niile.
Emepụtara site na mkparịta ụka na Ministry of Health & Medical Services (MHMS), Healthtù Ahụ Ike Worldwa (WHO), ndị ọrụ gọọmentị dị mkpa, Kiribati Chamber of Commerce, and Industry (KCCI), ndị na-ahụ maka njem nleta, na ụlọ ọrụ ọzụzụ mpaghara, usoro ogbugba ahụ na-enye Kiribati njem nleta na ndị ọrụ ile ọbịa kọwaara COVID-19 ọrụ nchekwa nchekwa.
Ọ bụ ezie na enweghị usoro oge doro anya na mgbe mba Kiribati ga-emepe emepe, usoro iwu ahụ gbadoro ụkwụ na mmeghe usoro ịmebe iji chebe ndị ọbịa, azụmahịa ndị njem na ọha na eze site na COVID-19.
N'ịbụ nke a na-eduzi n'azụ usoro ịgba ọgwụ mgbochi Kiribati, usoro mgbasa ozi Kiribati Tourism & Hospitality for the New Normal gụnyere ndị njem nlegharị anya COVID-19 nchekwa nchekwa maka njem, ụlọ nkwari akụ & ụlọ, ụlọ oriri na ọ barsụ &ụ & Ogwe, nchekwa ndị ọrụ, na mkpofu ahihia. Usoro ịgba ọgwụ mgbochi Kiribati na-ebu amụma 20% nke ndị bi na mba ahụ iji nweta ọgwụ nke abụọ nke ọgwụ AstraZeneca na njedebe nke August 2021
Hotelslọ oriri na ọ &ụ Northụ North & South Tarawa bụ ndị izizi gụrụ ọzụzụ ụbọchị 2, a kwadoro ndị sonyere ugbu a ka ha na-eduzi nchekwa COVID-19 maka ndị ọrụ ha. TAK ga-ewepụta otu ọzụzụ ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị njem na Abaiang na Kiritimati na ụbọchị ndị na-abịanụ ebe a ga-ezubere ọzụzụ maka ezumike nke ndị ọzọ nke Gilbert na Line Islands na njedebe nke afọ.
Ihe omume a na-enweta ego site na Grant Recovery Recovery nke US Embassy nke dị na Suva, Fiji, ma ndị TAK na KCCI na-achịkwa ya.
Ozi ndị ọzọ si Kiribati.